ललितपुरमा रेल बिस्तारै कुदाउँला, फ्लाइओभर चाहीँ तत्कालै बनाउँछुः चिरिबाबुको अन्तर्वार्ता – Clickmandu
ललितपुरमा रेल बिस्तारै कुदाउँला, फ्लाइओभर चाहीँ तत्कालै बनाउँछुः चिरिबाबुको अन्तर्वार्ता
क्लिकमान्डु २०७४ असार २८ गते ११:०० मा प्रकाशित
२० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन भएको छ । ढिलै भएपनि जनताले आफ्नो घरदैलोको सरकार पाएका छन् । आफ्नो गाउँठाउँको योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी लिने स्थानीय सरकार गठन भएपछि स्थानीयस्तरका विकास गतिविधिले तीब्रता पाउने विश्वास गरिएको छ । नयाँ संविधान बनेपछि राज्य पुनसंरचनासहित गठन गरिएको स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न छ । विकास निर्माणका लागि स्थानीय तहमा स्रोत साधनको अभाव छैन । स्थानीय स्तरमै स्रोत छन्, केन्द्रले अनुदान दिन्छ र प्रदेशले सहयोग गर्छ । गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अर्थमा लिने हो भने गाउँ वा नगर प्रमुख त्यहाँका प्रधानमन्त्री हुन् ।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई महिना वितिसकेको छ । चुनाबका बेला उम्मेद्वारहरुले विकासका चर्का नारा लगाए । निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन गर्न लाथेको पनि डेढ महिना वितिसकेको छ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि के कस्ता कामहरु भइरहेका छन् भनेर राजधानीको दोस्रो ठूलो महानगर ललितपूर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र ब्रबिमबिक्रम थापाले गरेको कुराकानीः
मेयरको कार्यभार सम्हालेको डेढ महिना भयो । ललितपुर महानगरको अवस्था कस्तो रहेछ त ?
यो अवधिको आधारमा हेर्दा हाम्रो बाहिरी सम्पर्क बेपत्ता राम्रो छ । जनमानसमा हाम्रो सम्पर्क र सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो छ । तर, वितेका १५ वर्षदेखि यो नगर जनप्रतिनिधि बिहिन थियो । यो अबधिमा कर्मचारीतन्त्रले चलाउँदै आएको ह्याङओभर प्रसस्तै बाँकी छ ।
कर्मचारीतन्त्रको ह्याङओभर भनेको के नि ?
यसको अर्थ के हो भने हामी निर्वाचिन जनप्रनितिधिले जुन रफ्तारमा काम गर्न खोजेका थियौं, कर्मचारीतन्त्र हाम्रो रफ्तारमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेनछ ।
विकासमा चाहीँ महानगर कस्तो रहेछ ?
चुनाब हुनुभन्दा अघिको र अहिलेको विकासको अवस्थामा खासै फरक छैन । किनभने हामी भर्खर आएका छौं । चुनाबताका हामीले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका कुराहरुको कार्यारम्भ गरिसकेका छौं । तर, रिजल्ट देखिन अझै केही समय लाग्छ । पुल्चोकदेखि थापाथलीसम्म डेढ किलोमिटरको फ्लाइओभर बनाउने भनेका थियौं । त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यस विषयमा जापानिज राजदूतसँग गंभीर वार्ता भयो । र, वार्ता सकरात्मक भयो ।
अहँ, हामी वृद्धभत्ता बढाउँदैनौ । र, वास्तममै भन्ने हो भने अहिले जसरी महानगरपालिकाहरुले आफूखुसी वृद्धभत्ता बढाइरहेका छन् । जसमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरेर वृद्ध भत्ता बढ्न दिँदैन । र, दिनु हुँदैन पनि ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि महानगरबासीले केही फरक अनुभूति गर्न पाए कि छैनन् ?
जनताले धेरै नै फरकको अनुभूति गर्न थालिसकेका छन् । सुशासनको हिसाबमा हामी निकै अघि बढिसक्यौं । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको पहिलो बैठकमै हामीले महानगरका २९ वटै वडाध्यक्षहरुका अघि ७ वटा महाशाखाका प्रमुखलाई अघि राखेर कुनैपनि वडाध्यक्षले ढल फुट्यो, बाटो बिग्रियोलगायतका महानगरले गर्नुपर्ने कामहरु लिखित निवेदनबिनै अघि बढाउन आदेश दिइसकेको छौं ।
मैले महानगरका सबै कर्मचारीहरुलाई बोलाएर १ घन्टामा सकिने काम ६१ मिनेट नलगाउन आदेश दिएको छु । एक दिनमा सकिने काम एक दिनमै सकिनु पर्यो भनेको छु ।
सबै वडाअध्यक्षहरुको साझा समस्या के भयो भने असार मसान्त आयो । असार मसान्तमा खर्च नभएको बजेट फ्रिज हुने त्रास थियो । असोज मसान्तसम्म पैसा खर्च गरे बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था मिलाइदिएँ ।
अहिले जेजति काम भइरहेको छ, त्यो हामी आउनुभन्दा अघि गरिएको टेन्डरको हो । हामी आएको डेढ महिनाको बीचका कुनैपनि नयाँ टेन्डर भएको छैन । तर, पुरानो टेन्डरको पनि अहिले फरक कार्यान्वयन छ । निर्वाचनका दौरानमा मैले ठाउँठाउँमा भाषण गरेको थिएँ, डेढ इन्चभन्दा कमको पीच महानगरलाई स्वीकार्य छैन भनेर ।
डेढ इन्चभन्दा कम पीच गर्नेको बैंक ग्यारेन्टी र भुक्तानी गर्न बाँकी रकम एक वर्षसम्म भुक्तानी नगर्ने घोषणा गरेको थिएँ । र, सो अवधिमा पीच बिग्रिए त्यही पैसाबाट बनाउन लगाउने भनेको थिएँ । म निर्वाचिन भइसकेपछि केही ठाउँमा डेढ इन्चभन्दा कमको पीच बनाएको उजुरीहरु आए । मैले तत्कालै एक्सन लिएँ । र, ठेकेदारले बाध्य भएर फेरि डेढ इन्चको नयाँ पीच गरे ।
अरु के के गर्नुभो त ?
अर्कोकुरा कर्मनाशा खोलामा दायाँ–बायाँ दुबैतिर सार्वजानिक जग्गा मिचेर खोलालाई ढलजस्तो बनाइएको भन्दै महानगरमा केही उजुरीहरु आए । मैले तत्कालै प्राविधिक पठाएर चेकजाँच गर्दा त्यहाँ सार्वजानिक जग्गा मिचिएको पाइयो । दायाँबायाँ लगाइएको पर्खाल हामीले भत्कायौं ।
तर, हामीसँग कम क्षमताका डोजर भएका कारण पुरै भत्काउन सकिनौं । एक चौथाइजति भत्कायौं । तर, त्यहाँ मेला लाग्यो । हामीले रातारात काम सक्न ठूलो क्षमताको डोज झिकायौं । तर, त्यो गरुञ्जेलसम्ममा उच्च अदालतबाट तत्काल केही नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश आयो । र, हामी अदालतको आदेश मानेर चुप लागेर बसेका छौं ।
महानगरका धेरै बस्तीहरुभित्र अलकत्रा पकाउने प्लान्ट राखिएको छ । त्यसले मानव स्वास्थ्यमा गंभीर असर परेको छ । त्यसलाई हटाउने निर्णय गरिसकेको छु ।
पुल्चोकस्थित राज अशोकले २५ सय वषैअघि आफ्नी छोरीलाई लिएर ललितपुर भ्रमणमा आउँदा यहाँका ४ मुख्य स्थानमध्ये एक स्थानमा बौद्ध स्तुप बनाइएको थियो । यो सम्पदा उपक्षेत्रमा पर्छ । भूकम्पले भत्काएको यो स्तुपा हामी पुनर्निर्माण गर्दैछौं । लालीगुराँस सहकारीले सम्पदा उपक्षेत्रमा परेको स्तुपा मिचेर आफ्नो भवन बनाएको रहेछ । मैले २४ घन्टाभित्र स्तुपाको मिचिएको जग्गा फिर्ता गर्न देश दिएँ ।
महानगरलाई सुन्दर बनाउन थापाथली क्रस गर्ने वित्तिदेखि लगनखेलसम्म सडकको दुबैतिर रहेको फुटपाथमा १५/२० फिट अग्ला रुखहरु चाँडैनै रुख रोपिने छ, जसले रातारात सहरलाई हरियाली र सुन्दर बनाउँछ ।
तर, उसले मेरो आदेश मानेन र उच्च अदालत गयो । उच्च अदालतले तत्काल कारबाही नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दियो । तर, लालीगुराँसले भवन बनाउन छाडेन । त्यसपछि मैले त्यो सहकारीको मान्छेलाई यहाँ बोलाएर अन्तरिम आदेश भनेको दुबैलाई लाग्छ, मेरो आदेश नमानी भवन बनाइरहन्छौ भने तिमीलाई ल्याएर थुनिदिन्छु भनेर थ्रेट गरेँ । अनि उसले भवन बनाउन छाड्यो ।
ललितपुर महानगरभित्र पनि ट्राफिक जामको समस्या उस्तै छ, यो समस्या हटाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
ललितपुर महानगरभित्र पुल्चोकदेखि थापाथलीसम्म फ्लाइओभर राख्ने हो । त्यसबाहेक अन्यत्र ठाउँमा फ्लाइओभर राख्न संभव छैन । किनभने १४ सय वर्ष पुरानो रातो मछिन्द्रनाथको रथ जात्रा ललितपुरका धेरै ठाउँमा हुन्छ । रथको लिंगो निकै अग्लो हुने भएकाले ललितपुर महानगरका धेरै ठाउँमा फ्लाइओभर बनाउन संभव नभएको हो ।
तर, चक्रपथले छुने ग्वार्को, सातदोबाटो, एकान्तकुना, बल्खुलगायतका स्थानहरुमा भने मिनि फ्लाइओभर र स्काइ ब्रिज बनाउने सोच बनाएका छौं ।
उपत्यकामा १० हजारको हाराहारीमा ट्याक्सी छन् । पिक आवरमा ट्याक्सीलाई जोर बिजोर गरी चलाउने हो भने पनि ट्राफिक जामको समस्यालाई केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जोर बिजोर सिस्टम लगाउने बित्तिकै पिक आवरमा ५ हजार मात्रै ट्याक्सी चल्छन् ।
नेपाल मात्रै यस्तो देश हो, यहाँ सबै कार्यालयहरु १० बजे लाग्छन् । र, ५ बजे बिदा हुन्छन् । हाम्रो सडक सानो छ जसकारण कार्यालय समय उपत्यकाबासीले ट्राफिक जामको ठूलो समस्या भोग्नु परेको हो । त्यसैले गृहमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा मैले ट्राफिक जाम हुने पिक आवरको म्यानेजमेन्ट गरेर अल्पकालका लागि समस्याको समाधान निकाल्न सकिने प्रस्ताब गरेँ ।
सरकारले निजी, सरकारी र सरकारी संस्थानहरुको कार्यालय समय फरक फरक तोक्ने होभने तत्कालका लागि पिक आवरको ट्राफिक जामको समस्याका न्यूनिकरण हुन्छ । जस्तो कि अहिले सबै कार्यालयहरु १० बजे लाग्ने भएकाले कर्मचारीहरु सो समयमा कार्यालय पुग्न घरबाट निष्कन्छन् । एकै समय लाखौं मान्छेहरु सवारी लिएर सडकमा निष्कँदा ठूलो ट्राफिक जाम भएको हो ।
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यालय समय ९ बजे, निजामति कर्मचारीलाई १० बजे र संस्थानका कर्मचारीलाई ११ बजे कार्यालय समय तोक्ने र सोही अनुसार साँझ कार्यालय बिदा हुने समय तोक्ने हो भने अहिलेको ट्राफिक जाम धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउँछ । मैले यो प्रस्ताब गर्दा गृहमन्त्रीजीले ‘हो त हैं साँच्चि’ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । अब कार्यान्वयन गर्नु हुन्छ वा हुन्न त्यो त उहाँको कुरा हो ।
त्यसैगरी, पिक आवरमा ट्याक्सीलाई जोर बिजोर गरी चलाउने हो भने पनि ट्राफिक जामको समस्यालाई केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । उपत्यकामा १० हजारको हाराहारीमा ट्याक्सी छन् । जोर बिजोर सिस्टम लगाउने बित्तिकै पिक आवरमा ५ हजार मात्रै ट्याक्सी चल्छन् । यी दुई उपाय त अल्पकालका लागि मात्रै हो । दर्घकालका लागि पूर्वाधारको विकास गर्नु जरुरी छ ।
पुल्चोकदेखि थापाथलीसम्म फ्लाइओभर बनाउन कति खर्च लाग्ने रहेछ ?
अहिले नै ठ्याक्कै यति खर्च लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा यो प्रोजेक्ट पूरा हुन्छ भनेर प्रारम्भिक आंकलन गरिएको छ ।
फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्दैहुनुहुन्छ ?
फोहोर व्यवस्थापनका बारेमा कुनैपनि सन्धी सम्झौताहरु नगर्नु भनेर नेपाल सरकारले हामीलाई भनेको छ । त्यसैले हामीले तत्काल फोहोर व्यवस्थापनका बारेमा सोचेका छैनौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरले महानगरभित्र रेल चलाउँछु भन्नुभएको छ, काठमाडौंसँग ललितपुरलाई रेलले कसरी जोड्ने ?
यहाँ कुराचाहीँ एकदमै हाइफाइ तरिकाको गरिन्छ । काम हुन्छ हुन्न भन्ने कुरा थाहा छैन । मैले फइओभरकै कुरा गर्दा पनि धेरै मान्छेहरुले चिरिबाबुले यो काम गर्न सक्दैन भनिरहेका छन् । तर, म विश्वस्त छु कि म फ्लाइओभर बनाउन सक्छु । र, बनाएर देखाउँछु पनि । म कुरा गरेरभन्दा काम गरेर देखाउँछु । ललितपुर महानगरभित्र तत्काल रेल चलाउने कुनै योजना छैन ।
हाम्रो महानगरले ८० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाले अस्पतालमा चेकअप गर्दा केही प्रतिशत खर्च महानगरले व्यहोरिदिने व्यवस्था गर्ने सोचमा छौं ।
महानगरलाई सुन्दर बनाउन थापाथली क्रस गर्ने वित्तिदेखि लगनखेलसम्म सडकको दुबैतिर रहेको फुटपाथमा १५/२० फिट अग्ला रुखहरु रोप्ने योजना बनाएको छु । जसले रातारात सहरलाई हरियाली र सुन्दर बनाउँछ । एउटै प्रकारको रुख रोपिने छ । त्यही रुख रोप्न आवश्यक पर्ने गाडी किन्ने प्रक्रियामा छौं । जे होस् यो सडकमा चाँडैनै रुख रोपिने छ ।
महानगर २४ सै घन्टा खुल्छ कि खुल्दैन ?
पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा पाटन दरबार स्क्वायर, पुल्चोक, धोविघाट, झम्सिखेल एरिया २४ सै घन्टा खुलाउने तयारी गरिरहेका छौं ।
पाटन दरबार क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षित गर्न के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
पाटन दरबार क्षेत्रमा औषतमा पर्यटकहरु १ दिन मात्रै बस्छन् । हामी कसरी पर्यटटकलाई बढीभन्दा बढी समय बस्ने बनाउने भनेर योजना बनाइरहेका छौं । पाटन ढोकादेखि भित्र जाने बाटोमा ढुंगा विछ्याउँछौं । दरबार क्षेत्रभित्र पर्यटकलाई बस्नका लागि ठूला होटेलहरु छैनन् । त्यसैले हामीले यो भित्र बस्नेहरुका लागि होमस्टेको व्यवस्था गर्दैछौं ।
ललितपुर महानगरभित्र लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताले कुन क्षेत्रमा कस्तो सहुलित पाउँछन् ?
लगानीकर्ता कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषय गंभीर हो । हामीले केही योजना बनाएका छौं । तर, यस विषयमा पर्याप्त छलफल भइनसकेकाले अहिले नै मैले यस्तो गर्छौं, उस्तो गर्छौं भनेर भन्न सक्दिनँ । तर, हामी लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने विशेष स्किमहरु भने अवश्य ल्याउने छौं । हामीले यहाँको उद्योग वाणिज्य संघ र चेम्बर अफ कमर्शलाई महानगरको आर्थिक विकास गर्न के गर्नुपर्छ भनेर सुझाब मागिसकेका छौं ।
ललितपुरलाई शैक्षिक हब बनाउने कुरा के भइरहेको छ ?
ललितपुरलाई शैक्षिक हब बनाउनका लागि मैले प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई सुझाब र प्रस्ताब दिन अनुरोध गरेको छु ।
पाँच वर्षपछि महानगर कस्तो हुन्छ ?
यसबारे मैले धेरै बोलिरहनु भन्दा पनि मैले चुनाबमा जाँदा जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्छु ।
वृद्धभत्ता त बढाउनु भएन नि ?
अहँ । हामी वृद्धभत्ता बढाउँदैनौ । र, वास्तममै भन्ने हो भने अहिले जसरी महानगरपालिकाहरुले आफूखुसी वृद्धभत्ता बढाइरहेका छन् । जसमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरेर वृद्ध भत्ता बढ्न दिँदैन । र, दिनु हुँदैन पनि । हाम्रो महानगरले ८० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाले अस्पतालमा चेकअप गर्दा केही प्रतिशत खर्च महानगरले व्यहोरिदिने व्यवस्था गर्ने सोचमा छौं ।
काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेलको जिम्मा मलेसियन कम्पनीलाई